Inja Yelusi waseJamani - inja enkulu ngokwaneleyo. Le yinto "yembumba" yonke, ngoko kufuneka ibe kwindawo efanelekileyo. Futhi ngaphandle kokutya okunempilo, inja yegusha ayiyi kukwazi ukuphuhlisa ngokupheleleyo. Umba obalulekileyo awukho inani leekhalori, kodwa umgangatho wesondlo. Ukutya koMalusi kuya kuhluka kwi-mongrel yelali. Ngoko yintoni okumele ukondle umalusi waseJamani, ngoko kungekhona nje umhlobo onamaqabane amane omndeni, kodwa kunye nenja esebenza ngokugcwele?
Umalusi waseJamani akakwazi ukunyusa ngokulula. Isiqubulo esithi: "Yintoni, into eyokudla" ayisebenzi. I-Sheepdog ayikwazi ukutya into efanayo imihla ngemihla, nokuba yinyama, apho abahlobo bethu abaneemilenze abane bafuna kakhulu. Emva kwakho konke, izidlo zasendle azidli kuphela inyama. Isondlo esifanelekileyo senja, kunye nomntu, sinomlinganiselo ohambelana namaqela amaninzi amacandelo.
- Okokuqala, iiprotheni (zombini isilwanyana kunye nemifuno), ezichaphazela ukukhula okufanelekileyo kunye nesakhiwo somzimba. Imithombo yabo egqibeleleyo yinyama, intlanzi, ushizi, amaqanda, ubisi.
- Okwesibini, i-carbohydrates enika amandla (i-bakery products, rice).
Okwesithathu, izilwanyana kunye nemifuno yemifuno ejongene nokuqokelela amandla (i-fat, cream and oil oil).
- Kwaye, ekugqibeleni, iivithamini, izityela, kunye nezixhobo ezincinci kunye nezikhulu ezijongene nokusebenza kakuhle kwezinto eziphilayo, eziqulethwe kwiziqhamo, imifuno kunye nezityalo.
Ngokubhekiselele kumzobo womntu, kunokuthiwa abantwana kunye neentsana ezikhula kwaye zikhula ngokukhawuleza zifuna ukutya okungaphezulu kwekhalori. Emva koko, ngumthombo osebenzayo wamandla. Kodwa abelusi baseJamani abaneminyaka yobudala, njengabantu abahlala phantsi, abadingi iikhalori ezigqithisileyo. Inja enjalo kufuneka ifumane i-1/3 yenyama xa iphethwe. 2/3 thabatha ukutya okubizwa ngokuthi i-ballast fodder, ukuzalisa isisu kunye nokuququzelela ukutya kokutya. Le ngumbane, i-oat flakes, ilayisi, i-pasta, isonka sesonka, izithelo, imifuno.
Kulula, ngokuqinisekileyo, ukondla inja yezimvu ngokutya okulungele ukulungiswa ngesimo se-granules, ukutya okusemathinini, njl njl. Inzuzo yabo ikulungele ukugcinwa kunye nokufumaneka kwezixhobo ezifunekayo zesayensi eziboniswe kwilebula. Nangona kunjalo, kufuneka kukhunjulwe ukuba xa ukondla ngokutya okumeleyo, ukungonakali kwayo kukuvuvukala kwisisu senja. Ngokuqhelekileyo kubangela ukuqhaqhazela kunye nokusabalalisa isisu okanye amathumbu, okusoloko kubangela ukufa kwezilwanyana. Inzuzo enkulu yokutya esilungiselelwe ngezandla zethu kukuba siyazi kakuhle ukuba luphi na. Ayikhokelela ekubetheni ngexesha lokutya, ayikwandisi imfuno yamanzi, enzima kakhulu, ngokubusika kwizinja zeegusha ezikhuliswe emagumbini.
Kungcono ukondla iJamani, njengawo nawuphi na enye i-sheepdog, ukutya okulungele ukulungiswa ngokutya kunye nemifuno nemifuno eninzi ebilisiwe. Ebusika, izinja zifumana amaxesha amahlanu ngeveki ukutya okufudumele okubilisiwe kunye nokudibanisa kwesincinci sokutya okumile, okulungiselelwe ngendlela yezoshishino. Ngexesha lehlobo lehlobo, xa ukutya okuphekiweyo kuphuthuma ngokukhawuleza, izinja zondliwa izikhathi ezine ngeveki ukutya okumile (okokuqala kuqala emanzini). Okwenziwe yenkomo enomnquba kunye nokuncinci kancinane kokutya okubilisiwe, ngoko kuxhaswa yi-ballast mass, ekhuthaza ukugaya. Ngezinye iiveki zeveki (ngokuqhelekileyo ngeminye imihla), abelusi bafumana ukutya okulungele ukulungiswa okugcinwe kwifriji. Inqabile kakhulu inja zezimvu zondliwa kuphela ukutya okumile, ngaphandle kohambo lokuzingela, imiboniso, ukhuphiswano.
Icandelo eliphambili ekudleni kwezinja libiza kakhulu inyama ebomvu. Nangona kunjalo, unako ukondla iimveliso zethu ezincinci. Ngokomzekelo, inkukhu, i-giblets, equle iivithamini ezininzi kunye nezinto ezibalulekileyo, isibindi, i-spleen, izintso. Kufuneka kukhunjulwe, nokuba kunjalo, ukuba izintso ziqulethe izinto ezinobungozi eziqokelelwe emzimbeni wezilwanyana ezibuleweyo, ngoko akufanele zinikezwe ngaphezu kwama-2 ngeveki. Iimvu zesisu, amathumbu, i-udders kunye nemiphunga nazo zifanelekile. Umlinganiselo wezinto zenyama kuzo zonke zifanele zibe ngu-1: 3. Zonke iimveliso zenyama kufuneka ziphekwe okanye ziphekwe. Inkomo inganikwa kwakhona kwifom eluhlaza. Iimvukazi akufanele zifumane amathambo amade ezinkukhu zasendle kunye nasekhaya, kunye neengqama ezimbi. Amathambo amahle kakhulu yilwanyana okanye inyama.
Umalusi onempilo, onomfuyo waseJamani unelungelo lokukhupha isitya ngomzuzu we-5-15. Ukuba kukho into ehlala kwiitya emva koko, kufuneka isuswe kwicala. Indlela yokondla inja ixhomekeka kwimeko yakhe yokutya nesimo se-psychophysical.
Umalusi waseJamani unesayizi enkulu. Ngenxa yoko, inomzila omdala wokutya, apho ukutya kuhamba khona. Kwezihlandlo ezimbini ngenyanga, abanye abalimi abaqeqeshi baququzelele isiteleka sokulamba kubaalusi ukuze bahlambulule inkqubo yokugaya inyama kwizinto ezinobuthi. Emva kwakho konke, abaxhamli abafanayo abayidli rhoqo. Badla kuphela xa babamba nantoni na inqatha, inkqubo yabo yokugaya ishintshwe ngendlela enje yokutya.
Ukongeza kwenyama, inja yegusha kufuneka inikezwe ngezityalo ezininzi, izityalo, iifaldi, ukususela kwiimifuno ezityiweyo zimbalwa amavithamini kunye nosawoti wamaminerali. Ukutya okunjalo kuyimfuneko ukuyijwayela kwi-puppyhood, kuba kamva kunzima ukufundisa. Ngaphandle kwama-vithamini, i-micro- kunye ne-macroelements kunye nemizimba ye-ballast, ngokukhawuleza okanye kamva ukuphazamiseka kwe-digestion, izifo kunye ne-beriberi ziqala ukubonakalisa. Iingcuka kunye neenja ezimbi zixazulula ingxaki yeivithamini, ukutya izityalo ezahlukeneyo, izityalo, iingcambu. Abo bangathembeki "amavithamini e-canine" bongeza kwiipilisi zamabhodlela ezijoliswe kwabasetyhini abakhulelweyo.
Kucetyiswa kakhulu ukuba ugweme ukunyusa umalusi waseJamani. Ingakhokelela kwizifo ezinzulu: ukugqithisa ngokweqile, i-atherosclerosis, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, ukumbombola, nokuvuvukala kwamathumbu. Isisu somalusi siqiniswa ngamandla emzimbeni kwaye sikwazi ukuguqula i-axis yayo ngexesha lokuzonwabisa okanye ukugijima emva kwesidlo esikhulu. Le ngxaki izuzwe njengezinja zezimvu ezivela kookhokho babo - iingcuka ziyaba nesisu esikhulu kangangokuthi ziba zidla ngokutya emva kokuzingela ngokuphumelelayo, emva koko zikwazi ukuphumla iintsuku eziliqela. UMalusi, xa udla ngokutya, akakwazi ukususa ukutya okungaphezulu. Ngaphandle kwenkxaso yezilwanyana, uya kufa ebudeni kwiiyure eziliqela. Kukho amaninzi amatyala.
Abaninzi abanini beelusi baseJamani bakulungele ukubonelela abahlobo babo abaneemilenze ezineemeko ezifanelekileyo. Nangona kunjalo, akubona wonke umntu okhumbula ukuba oku kusebenza kwondlo. Ngoko ke, asimele sikhohlwe ukuba imbangela yokuphulwa kweenkqubo ezininzi zokutya, kwaye ngokukodwa ubunzima obuninzi bezinja zezimvu, kukutya okungafanelekanga.
Imibuzo enomdla malunga nezilwanyana kunye nezimpendulo zabo
Isilwanyana kunye nendoda ibambiswano elinganayo
Ukutya okukhawulezayo ukusuka ku-Alla Pugacheva
U-Alena Shishkov uphinde wamangalela ngeenkonzo zokuhambisa
Isalathisi esongwe ngeoli
Indlela yokukhulisa uthando lomntwana kumama
Ukukhethwa kwezilwanyana ezilungileyo kumtshato
UTimati wahlazisa u-Anastasia Reshetov, kwaye u-Alyona Shishkova wayekho uluhlu lukaPavel Durov
Ukunceda abanye, impilo yakho intliziyo
Ungayigcina njani ingubo yomzi
I-Osteoporosis: Iiklinikhi, Ukuxilonga, unyango
Iimpawu ezibonakalayo zezodiac phakathi kwabantu. Kwaye i-Scorpions ayifakiwe kuloluhlu ...
Iinqebhoko nge tshokiti kunye nemeringue
Umntwana waseTrarac, umsila we-hypertonic
Indlela yokunyamekela izityalo zangaphakathi pahistahis
Iibhatateshi kwi style hussar
I-currant emnyama ebusika kunye noshukela ngaphandle kwayo. Ukupheka kwe-currant emnyama ebusika kwifriji